Hive Platform မှ သိမှတ်စရာများ - အပိုင်း - ( ၁ ) ( Henry Aung ) - PALnet
Hive Platform မှ သိမှတ်စရာများ - အပိုင်း - ( ၁ ) ( Henry Aung )
မင်္ဂလာပါ။ ယခု ဖေါ်ပြမည် ဖြစ်သော စာစုမှာ Hive Platform ပေါ်သို့ ရောက်နှင့်နေပြီးကြသော မိတ်ဆွေများအတွက် မရည်ရွယ်ပါ။ အသစ်ရောက်လာကြမည်ဖြစ်သော Newbie များအတွက် အဆင်ပြေကြစေရန် ရည်ရွယ်ရေးသားထားခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
အတွေ့အကြုံရှိထားပြီးသော မိတ်ဆွေများကလည်း ကျွန်တော်ရေးသားထားသော စာစုတွင် လိုအပ်ချက်များရှိပါက ကော်မန့်တွင် ထပ်မံဖြည့်စွက်နိုင်ပါသည်။
ကျွန်တော့ အနေဖြင့် ဤစာစုအား " Hive Platform မှ စိတ်ဝင်စားစရာ "ဟု ခေါင်းစဉ်ပေးရန် ရည်ရွယ်ထားသော်လည်း " Hive platform မှ သိမှတ်စရာများ " ဟု ခေါင်းစဉ်ပေးရလျင် ပို၍ သင့်လျော်သောကြောင့် ဤ ခေါင်းစဉ်ပေးလိုက်ရခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ စလိုက်ကြပါစို့။
လူသစ် တယောက်အနေဖြင့် Hive Platform သို့ရောက်လာလျင် မဖြစ်မနေ လုပ်ဆောင်အပ်သော အရာတခုမှာ မိမိကိုယ်ကို မိတ်ဆက်ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ မိမိကိုယ်ကို မိတ်ဆက်ရာ၌ မိမိသည် မည်သူမည်ဝါ ဖြစ်သည် ၊ မည်သည့်နေရာဒေသ တွင် နေထိုင်သည် ၊ မိမိ အလုပ်အကိုင် ဝါသနာ စသည်ဖြင့် ဖေါ်ပြပေးနိုင်လျင် အလွန်ပင်သင့်လျော်ပါသည်။
မိမိ နေထိုင်သော အရပ်ဒေသသည် လူသိနည်းသော နေရာ ဒေသဖြစ်လျင် မည်သည့်မြို့ / ကျေးရွာ / ဒေသ စသည်ဖြင့် ဝေဝေဆာဆာ ဖေါ်ပြပေးလျင်ဖြင့် အလွန်ကောင်းမွန်သော မိတ်ဆက်စာ ဖြစ်လာမည် ဖြစ်ပါသည်။
ထို့အတူ မိမိ ဒေသ၏ နာမည်ကြီးရာ နေရာ / အစားအသောက် / ထူးဆန်းဖွယ်ရာများအား ထည့်သွင်းရေးသားလိုက်လျင်ဖြင့် မိမိအား မိတ်ဆွေ အဖြစ် အသိအမှတ်ပြုပေးရန် မည်သူမျှ ဝန်လေးကြတော့မည် မဟုတ်ပါ။
ကျွန်တော့ အနေဖြင့် Steemit platform သို့ ဝင်ရောက်ကာစတွင် မိမိ မိတ်ဆက်စာ ( Introducing post ) မကောင်းလှသောကြောင့် အခြားသူငှာများ သတိပြုမိစေရန် ဒုတိယမြောက် Post တွင် မူယစ်ဆေးဝါး အကြောင်းဖြင့် အခြားသူများအား ဆွဲဆောင်ခဲ့ရပါသည်။
ဆိုလိုသည်မှာ မိတ်ဆက်စာ ကောင်းကောင်း တခုသည် တချီတည်းဖြင့် မိမိအား Hive platform တွင် လူသိများစေရန် ကောင်းစွာ အထောက်အကူပြုပါသည်။
ဤတွင် ကျွန်တော့ အနေဖြင့် အကြံပြုလိုသည်မှာ Hive platform တွင်ပထမဆုံး မိမိ မိတ်ဆက်စာ ( introducing post ) အတွက် မိမိ ပုံအားထည့် ရန် ဝန်မလေးပါနှင့်။ Hive platform သည် အကောင့် ပုန်းများထက် မိမိကိုယ်ကို မည်သူမည်ဝါ ဖြစ်ကြောင်း ကြေညာထားသူများအား ပို၍ Support ပေးပါသည်။
မယုံမရှိပါနှင့် ။ Hive platform တွင် စာရေးကောင်းသူဟု နာမည်ထွက်လာလျင် ပထမဦးဆုံး ပြေးကြည့်ကြသည်မှာ ထိုသူ၏ introducing post ဖြစ်ပါသည်။ ဤသူ သည် အကောင့် ပုန်း လော... မိမိကိုယ်မိမိ ဖေါ်ပြထားသူလောဟူ၍ ကြည့်ကြခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
မိမိကိုယ်ကို ဖေါ်ပြထားသူ မိမိရုပ်အား အများသူငှာ သိထားစေသူတို့မှာ အမှန်ပင် ထောက်ခံမှု ရပါလိမ့်မည်။ ဤနေရာတွင် သတိထားစေလိုသည်မှာ မိမိ၏ မိတ်ဆက်စာ ( Introducing post ) ရေးရာတွင် မြန်မာလို ရေးမည်လော ? English လို ရေးမည်လော..? ဟူ၍ ဖြစ်လာပါသည်။
ကျွန်တော့ အနေဖြင့် Introducing post တွင် မြန်မာ / အင်္ဂလိပ် နှစ်မျိုးရေးပြနိုင်လျင် ပို၍ သင့်လျော်ပါသည်။ ဤ တွင် အမုန်းခံ၍ အနည်းငယ် ပြောပြလိုပါသည်။ မိမိမှာ အင်္ဂလိပ်စာ အခြေခံ မပြည့်စုံသော်လည်း မိမိ မိတ်ဆက်စာ အင်္ဂလိပ် လိုရေးရာတွင် တတ်ကျွမ်းနားလည်သူတို့အား ချဉ်းကပ်စေချင်ပါသည်။
Google Translate ရှိသည်ဟူ၍ အရမ်းကာရော ဘာသာပြန်ကာ မဖေါ်ပြစေလိုပါ။ မိမိ၏ ပထမဆုံးသော မိတ်ဆက်စာ သည် ကပေါက်တိကပေါက်ချာ ဖြင့် ရေးသားထားသော အင်္ဂလိပ်စာ မဖြစ်စေရန် စေတနာဖြင့် သတိပေးရခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
မိမိ အနေဖြင့် အင်္ဂလိပ်လို မရေးသားနိုင်သော်လည်း အဆင်ပြောချောမွေ့သော မြန်မာစကားပြေဖြင့် ရေးသားထားလျင် Unicode ဖြင့် ဘာသာပြန်ဖတ်သူတို့ အဆင်ပြေပါလိမ့်မည်။ အနည်းငယ် အထစ်အငေါ့ရှိလျင် တောင် ဖတ်ရှုသူတို့ နားလည်ပါလိမ့်မည်။
ဤ အကြောင်းအရာအား အဘယ့်ကြောင့် အမုန်းခံ၍ ပြောရခြင်းဆိုသော် ယခင် Steemit ကာလက မြန်မာ အကောင့်တို့သည် မိမိတို့အား အခြားသူများ သတိပြုမိစေရန် စာ / ဆောင်းပါး များအား ကိုးရီးယား / ဂျပန် / အင်္ဂလိပ် / ပြင်သစ် အစရှိသော Hive platform မှ အခြားသောနိုင်ငံသားများ သတိပြုမိစေရန် Google translate ဖြင့် ပြုလုပ်ကာ Post များတင်ကြပါသည်။
ထွက်ပေါ်လာသော စာများမှာ ကပေါက်တိပပေါက်ချာ grammar များဖြင့် ထွက်လာသည် ဖြစ်ရာ များစွာ ရှက်စရာကောင်းလှပါသည်။ ထိုမျှသာ မက ထိုအကောင့် ပိုင်ရှင်တို့မှာ လူအထင်ကြီး ပြီးရော စသည်ဖြင့် Google translate အားကိုးဖြင့် ဘာသာပြန်လိုက်သည်မှာ နိုင်ငံ့ခေါင်းဆောင် ဗှိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း အကြောင်း / ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အကြောင်း... မိတ်ဆွေတို့ စဉ်စားကြည့်ပါလေ ...
မိမိတို့ လေးစားသမှုပြုနေသော နိုင်ငံ့ခေါင်းဆောင်များ အကြောင်း ကပေါက်တိကပေါက်ချာသော အင်္ဂလိပ်စာ ဖြင့် Post တင်ထားလျင် မည်သို့ ခံစားရမည်နည်း။ မည်မျှရှက်ဖွယ်ကောင်းပါသနည်း။
ထို့ကြောင့် ဤ အကြောင်းအရာအား ကျွန်တော့ အနေဖြင့် အမုန်းခံ၍ ပြောရခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ အကယ်၍ အသစ်ဝင်လာသော မိတ်ဆွေသည် အင်္ဂလိပ်စာ ကျွမ်းကျင်နေလျင် ပြောစရာမရှိပါ။ မြန်မာများ အတွက် ဂုဏ်ယူစရာပင်ဖြစ်ပါသည်။
နောက်ဆုံး နိဂုံးအနေဖြင့် အဆုံးသတ်ရလျင် Hive platform ပေါ်သို့ ပထမဆုံးရောက်လာ၍ မိတ်ဆက်စာ Introducing post တင်သူများသည် မဖြစ်မနေ Tag တွင် Introducingmyself ဟူသော tag ထည့်ပေးရမည် ဖြစ်ပါသည်။ သို့မှ သာ Hive platform တွင်ရှိနေသော အကောင့်အားလုံးက မိတ်ဆွေ၏ မိတ်ဆက်စာအား မြင်နိုင်၍ Vote ပေးသည့်အပြင် Comment များတွင် ကြိုဆိုကြောင်း စာပြန်ကြပါလိမ့်မည်။
ဤ Introducingmyself tag အား လူသစ်များအားလုံး မသိကြသေး၍ တခုတ်တရဖေါ်ပြပေးရခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ မနက်ဖြန်တွင် Hive platform မှ Tag များအကြောင်း ဖေါ်ပြပေးပါမည်။
31/08/2021 - Tuesday - 20:02 Pm
hive-122133 myanmar hive proofofbrain archon neoxian aeneas creativecoin leo palnet
Introducing ထပ်တင်ဖို့ စိတ်ကူးထားသေးတယ်ဗျ။
Mission တစ်ခု အချိန်တစ်ခု စောင့်နေသေးတာ။
မျှော်လင့်စောင့်စားရတာပါ့။ အဆင်ပြေပါစေ။ !PIZZA
Newbie တွေအတွက် မဖြစ်မနေ လုပ်ဆောင်သင့်တဲ့ အချက်တွေကို ပြောပြပေးထားတာ ကောင်းမွန်လှပါသည်။ !PIZZA
ညီကတော့ Hive မှာ အရှိန်ရနေပါပြီ။ လူသစ်တွေကို တွဲခေါ်ဖို့ မမေ့ပါနဲ့။ !PIZZA
Did you know you can now buy Rising Star packs with $PIZZA? (5/20)
မိမိကိုယ်ကို ဖေါ်ပြထားသူ မိမိရုပ်အား အများသူငှာ သိထားစေသူတို့မှာ အမှန်ပင် ထောက်ခံမှု ရပါလိမ့်မည်။
အဲ့တာတော့အမှန်ပဲ ဆာဟင်။ Support team တွေကလည်း အကောင့်သစ်တွေကို
ကြိုဆိုပြီး အားပေးကြပါတယ်။ မြန်မာစာက Google Translate မှန်ကန်အောင်
မလုပ်ပေးနိုင်သေးဘူး။ ရိုးရိုးရှင်းရှင်းရေးတာတောင် ကိုယ့်ဟာကိုပြန်စစ်ပြီး၊
ပြုပြင်ရသေးတာ။ ဒါပေမဲ့ တစ်ချို့စဥ်းစားမရတာတွေ ရှာကြည့်ရင်တော့ အဆင်ပြေပါတယ်။
Did you know Pizzabot in Discord hasabunch of useful commands? (4/20)
ကျွန်တော့်တုန်းကလည်း facebook တွေ့ပြီး စလုပ်တုန်းက သေသေချာချာ
မသိခဲ့ဘူး အကို intro ကိုတောင် သေသေချာချာ မရေးခဲ့ရဘူး ဘာမှ မသိလို့
အကို့ post က လူသစ်တွေအတွက် အများကြီး အထောက်အပံဖြစ်ပါတယ် အကို
ကြိုးစားရေးနေရတာပါ့။ ဘယ်နှယောက် လိုက်နာမယ်မသိပါဘူး။!PIZZA
ကိုဟင့်စာ ဖတ်ပြီးမှ ကိုယ်တွေ Introducing ရေးတုန်း ကမန်းကတန်း
ရေးခဲ့ရတာပြန်သတိရပါ့ ခုနေ အေးအေးဆေးဆေး
ပြန်ရေးရရင် အင်း လူငယ်တွေ ရေးချက်တော့ မှီမယ်မထင်။
အမှန်တော့ အစကောင်းမှ အနှောင်းသေချာ ဆိုသကိုးလို့.... အစမကောင်းရင် ပင်ပန်းရတာပေါ့လို့... !PIZZA
Have you voted for Pizza teams Hive witness (pizza.witness)? (2/20)
ဟုတ်သဗျို့ လူငယ်များ သတိပြုဖွယ်ပ။
My name is Deepak. I am Indian. I live inasmall village. And I haveabrother. I am alsoafarmer. I like my work. But I hive always talk.
I do like your post … and also I have lots of Indian friends … !PIZZA
@ahlawat! I sent youaslice of $PIZZA on behalf of @kachinhenry.
Have you voted for Pizza teams Hive witness (pizza.witness)? (1/20)